खुशी दिवसमा हामी कति खुशी ? | We Nepali
खुशी दिवसमा हामी कति खुशी ?
वीनेपाली | २०७२ चैत ७ गते १५:१८
आज २० मार्च, अन्तर्राष्ट्रिय खुशी दिवस । अहिले विश्वभर यो उत्सव मनाइएको छ जुन संयुक्त राष्ट्रसंघले २०१२ मा घोषणा गरेको थियो । यो दिवसमा खुशी मानिसको आधारभूत उद्देश्य हो र सबै देशका प्रशासकले सार्वजनिक नीतिहरु अवलम्वन गर्दा मानिसको सम्वृद्धि र खुशीको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने मुख्य मापदण्ड राखिएको छ ।
जीवनमा खुशी हुनु भनेको हामी काम गर्ने ठाउं हो जहां २० देखि ३० वर्ष आफ्नो जीवनको अमूल्य समय बिताउंछौं, जुन औसत मानिसको आयुको ३० प्रतिशत हो । आफूले काम गरेको ठाउंमा खुशीपूर्वक बितायौं भने आधा खुशी त्यहांबाट मिल्छ । यसलाई प्रभाव पर्ने विभिन्न कारकतत्व हुन्छन् जस्तै व्यवसायिक सम्बन्ध, व्यवसायिक खुशी, व्यवसायिक विकास, काम र जीवनको सन्तुलन, आफू आवद्ध संस्थाको सांगठनिक संस्कृति आदि । दिनभरी काममा खुशी रहन सक्यौं भने घरको वातावरण सहज रहन सक्छ केही अपवाद बाहेक ।
अब देशका जनताका लागि कसरी खुशी बनाउन सकिन्छ त ? माथि उल्लेख गरिएको कामको खुशी त समग्र रूपमा देश सम्वृद्ध भए न त्यो प्रकारको वातावरण बन्छ । जस्तै भुटानले आफ्नो देशका जनतालाई खुशी राख्न कूल राष्ट्रिय खुशीको नयां अवधारणा ल्याएको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्सले पनि जनताको खुशीलाई विशेष किसिमले कसरी सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले गत महिना मात्र खुशी मन्त्रालय स्थापना गरेको छ । यो नै जनताप्रति राज्यले गर्ने पहिलो कदम हो ।
अब खुशीका सूचकहरु के के हुन् ? के गर्दा जनता खुशी हुन्छन् ? भन्ने सूचीगत रुपमा केलाएर निक्र्योल निकालेपछि मानिसलाई खुशी दिलाउने उपाय र संयन्त्रहरु प्रयोगमै ल्याउन सकिन्छ जसले सांचो अर्थमा राज्यले जनताप्रति गरेको गहिरो हेरचाह झल्काउंछ ।
हामी नेपालका मानिसहरु आधारभूत रुपमा खुशी हुनु भनेको सर्वप्रथम राज्यले देशप्रतिको अपनत्व दिलाउन सक्नु हो । समानरुपमा न्यायोचित ढंगले सकारात्मक विभेद गरेरै भएपनि सबैलाई यो मेरो देश हो भन्ने भावना जगाउन सक्नु पहिलो कदम हो । कुनै वर्ग, जाति, क्षेत्र, धर्म र भाषा संस्कृतिप्रति भेदभाव नराखी सामाजिक न्यायको अनुभूति दिलाउन सक्नु नेपालको सन्दर्भमा अहिले राष्ट्रिय खुशी हुन आउंछ । यी यस्ता कुराको व्यावधानबाट पार पाएपछि बांकी भौतिक विकासका कुरा आफसेआफ सुरु हुन्छ किनकि जनताका यी नदेखिने तर अति नै संवेदनशील कुरामा हेक्का राख्ने देशको प्रशासकले भौतिक विकासमा पक्कै खरो उत्रिन्छ ।
खुशी हुनु भनेको अरुको लागि एक मुस्कान मुसुक्क हांस्नु र एक छिन खितखिताउनु होइन । खुशी हुनु भनेको सही अर्थमा मनमा व्यैक्तिक सन्तुष्टि हुनु हो । तर, निरपेक्ष खुशी खोज्नु भनेको चाहिं नाजायज हो किनकि यो संसारमा नै निरपेक्ष रुपमा कोही पूर्ण छैनन् ।
स्मरण रहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय खुशी दिवसको पूर्वसन्ध्यामा गत हप्ता मात्र जारी एक रिपोर्टले भुटान ८४ औं, संयुक्त अरब इमिरेट्स १० औं र नेपाल १०७ औं खुशी देशको सूचीमा रहेको देखाएको छ ।